Ifama yeWoodgarlic-Phantsi kweKhaya leHolide leNkwenkwezi
Ifama sinombuki zindwendwe onguLiz
Ukuzimela, ukuziphekela ikhaya leholide enendawo yokugcina izinto kunye negadi ejonge iimbono ezigqwethekileyo ze-Emerald Isle yethu entle. Phumla kwaye uphumle kwindawo enoxolo kwiholide esekwe kwindalo.
Ikharavani emileyo enoluhlu lwevintage, ifenitshala yasekhaya kunye nazo zonke iimod cons ukukunceda ukuba ukonwabele iholide yakho.
Relax kumhlaba wethu omncinci ophilayo kunye neegadi ezilungele izilwanyana zasendle, amaplanga, umlambo kunye nedama. Yiza udibane neenkukhu neegusha.
Ifakwe kwindawo entle yasemaphandleni kumda wedolophu yaseMayo.
Ikhaya leeholide yikharavani emile esandula ukulungiswa kwaye yalungiswa ngokutsha ngexesha lokutshixa ngefanitshala entsha etofotofo kunye ne-upcycled kwisitayile se-rustic. Yindawo entle yokuphumla nosapho kunye nabahlobo kwaye siyazamkela izinja eziziphethe kakuhle.
Ikhaya linamagumbi okulala amabini amancinci kunye athokomeleyo aneetafile ezisecaleni kwebhedi kunye nendawo yokugcina. Zombini iibhedi zineengubo zombane kwaye zonke iibhedi kunye neetawuli zokuhlambela zikhona.
Ikhitshi libandakanya i-oveni yegesi, igrill kunye ne-hob eneepani ezininzi, izixhobo kunye netafile ekwiikhabhathi. Isinki yasekhitshini inamanzi okusela etephini. Isikhenkcisi sombane, itoaster kunye neketile zibonelelwa ukukwenzela lula. Kukho ikhabhathi enkulu yepantry yokugcina igrosari yakho ngomgqomo wesonka kunye neetoti zokugcina. Kukwabonelelwa ngeti, ikofu, iswekile, ioyile yokupheka, ityuwa, ipepile kunye neviniga.
Igumbi lokuhlala elinesicwangciso esivulekileyo linamagumbi amathathu okulala kunye netafile yokutyela kunye nezitulo. Itafile inamavili ukuze itsalwe ngokulula ukuya embindini wegumbi ukuze ihlale ezine ukutya okanye ukudlala imidlalo yebhodi enikiweyo. Kukho uluhlu lwe-turf yemveli ekhuselwe ivintage enokuthi isetyenziswe ukufudumeza ikhaya kunye nokupheka. I-TV encinci ehlakaniphile ibandakanyiwe ukubukela kwiinkqubo ezifunwayo kodwa ingasasazwa ngqo.
Kukho izindlu zangasese ezimbini zomgquba, enye inesitya sokuhlambela kwindawo yokugcina izinto kunye negumbi lokuhlambela eliphambili ngaphakathi kwikharavani eneshawa yombane, yangasese yomgquba kunye nesitya sokuhlambela.
I-Conservatory sisakhiwo esilungileyo esenziwe ngezinto ezibuyiselweyo kunye ne-sofa ye-wicker kunye ne-armchair. Ukongeza kwindawo yokuhlala, sibonelela ngezihlalo ezimbini zedesika kunye neebhedi ezimbini zelanga ezisetyenziselwa egadini ngeentsuku ezinelanga. Kukwakho nendawo ekhuselweyo yegadi enetafile kunye nezitulo (eziluncedo kwabatshayayo) kunye nomgodi womlilo wokonwaba kwimozulu entle ngezixhobo zeBBQ.
Eli khaya lineWi-Fi, iintsinjana zombane kunye namanzi. Kukho indawo yokuba ubuncinane iimoto ezimbini zokumisa engceni ecaleni kwegadi.
I-Woodgarlic Farm yi-5 acre organic smallholding apho siziqhelanisa ne-permaculture, sisebenza nendalo ukuze siphile ngokuzinzileyo kwaye sinikezele ngendawo ekhuselekileyo yezilwanyana zasendle. Malunga nekhaya leeholide sinegadi enokutyiwa enemithi yeziqhamo kunye namatyholo, iibhedi eziphakanyisiweyo kunye nesiqwenga semifuno. Ungazibona izilwanyana zasendle eziquka iindidi ngeendidi zeentaka (kuquka oonothwathwane, amaphixa kunye neenkukhu zethu eziziintlobo ngeentlobo), imivundla, imivundla, amasele, iimpuku, amalulwane neempungutye kunye nezinye izinambuzane ezinomdla ezifana nohlabamanzi namabhabhathane, musa ukumangaliswa kukufumana ezinye. izinambuzane ezizama ukwabelana ngendawo yakho. Sinenja kunye nekati kwindlu yasefama enokuthi ize kukubona kodwa akufanele ingene ekhaya okanye egadini.
4.77 · Izimvo eziyi-66
Abamelwane balima iinkomo neegusha kwaye unokuwabona amahashe njengoko ujikeleza iindlela zasekuhlaleni.
Njengendawo esemaphandleni kufuneka uqhubele kwiilali zasekhaya kunye needolophu kwiivenkile, ii-pubs, iindawo zokutyela kunye nezinto ezinomtsalane. Ilali yengingqi yaseBallindine ibonelela ngekhemisti, ivenkile encinci kunye neSupermacs yokuthatha kwisikhululo sepetroli. IClaremorris kunye neBallyhaunis zineevenkile ezininzi kwaye zombini zikwimizuzu engama-20 yokuqhuba.
Umtsalane wasekhaya ubandakanya ukuhamba okubukekayo kweCloonfad, iGraune Pet Farm & neZiko lokudlala kunye neKnock Shrine.
Kwisithuba seeyure zokuqhuba unokufumana izinto ezininzi ezinomtsalane kunye namacandelo e-Wild Atlantic Way, iCong kunye neAshford Castle, iConnemara, iGalway, iWestport, iCastlebar, iRoscommon, iBoyle kunye neWest of Ireland Airport.
Sihlala efama kwaye sizame ukufumaneka xa kuyimfuneko kodwa sikwakunika imfihlo ukuze uphumle kwaye wonwabele iholide yakho. Kuyasivuyisa ukukhenketha ifama kwaye simeme iindwendwe ukuba zihambe nathi ukuze sidibane neegusha nezikhukukazi.
Siqhele ukuba sekhaya okanye sisebenza efama ngoko sithumele umyalezo okanye uze usifumane xa kukho into oyifunayo.
Sihlala efama kwaye sizame ukufumaneka xa kuyimfuneko kodwa sikwakunika imfihlo ukuze uphumle kwaye wonwabele iholide yakho. Kuyasivuyisa ukukhenketha ifama kwaye simeme iindwendwe…